Izvo zvaunoda kuti uzive nezve yezororo mwaka wekutakura, kukanganiswa kwecheni kukanganiswa uye zvinorehwa ne2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Izvo zvaunoda kuti uzive nezve yezororo mwaka wekutakura, kukanganiswa kwecheni kukanganiswa uye zvinorehwa ne2022
Nepo wave wechipiri weCovid-19 uchiita senge uri kudzikira, njodzi yedambudziko repasi rose inogara munzvimbo dzese dzehupenyu hwezuva nezuva. Consumer chigadzirwa zvigadzirwa, semuenzaniso, zvakanyanya kusagadzikana. Nemashefu asina chinhu pazvitinha-uye-mumatope vatengesi uye kunonoka kwekutakura kubva kune vatengesi vepamhepo, vatengi vanosangana nekusava nechokwadi nezvekutora zvinhu zvavanoda - kunyanya vachienda mumwaka wekutenga wezororo. Munguva pfupi Q&A, Chris Craighead, John H. "Red" Njiva Purofesa mu Supply Chain Management neYunivhesiti yeTennessee, Knoxville's Haslam College yeBhizinesi uye nyanzvi yekusagadzikana kwekutengesa, munguva pfupi yapfuura yakataura mwaka wezororo kutenga uye kutakura kunetseka uye kupa cheni matambudziko kazhinji.
Nepo wave wechipiri weCovid-19 uchiita senge uri kudzikira, njodzi yedambudziko repasi rose inogara munzvimbo dzese dzehupenyu hwezuva nezuva. Consumer chigadzirwa zvigadzirwa, semuenzaniso, zvakanyanya kusagadzikana. Nemashefu asina chinhu pazvitinha-uye-mumatope vatengesi uye kunonoka kwekutakura kubva kune vatengesi vepamhepo, vatengi vanosangana nekusava nechokwadi nezvekutora zvinhu zvavanoda - kunyanya vachienda mumwaka wekutenga wezororo. Mune pfupi Q&A, Chris Craighead, John H. "Mutsvuku" Njiva Muzvinafundo muKutengesa Chain Management neYunivhesiti yeTennessee, Knoxville's Haslam College yeBhizinesi uye nyanzvi yekusagadzikana kwekutengesa, munguva pfupi yapfuura yakatarisana nenguva yezororo yekutenga nekutakura kwekutakura uye matambudziko ezvekutengesa kazhinji.
Mubvunzo: The US Postal Service inoratidza kutumira tsamba dzekutengesa pasi naDecember 15, tsamba yekutanga-tsamba naDec. 17, tsamba yekutanga naDec. unogona kutumira zvipo pamberi peHalloween kuve nechokwadi chekuendeswa kwemwaka wezororo. Kana iyi nhoroondo iri yechokwadi, iyi inyaya yekutengesa zvinhu?
A: Kunyangwe ini ndisingazive nekutsvagurudza chaiko shure kwemishumo iyi, ndinotenda kuti vatengi vanofanirwa kusvika gore rino zvakasiyana neyakaitika mwaka wenguva yezororo. Ichi chakanyanya kwazvo nyaya yekutengesa. Iyi inyaya yekutengesa zvinhu, nekuti dambudziko riri padanho nderekuti kugona kuendesa huwandu hwemapakeji / zvigadzirwa zvakaganhurirwa nezvinhu zvakati wandei, sekushomeka kwezvinhu zvevashandi nekutakura (semuenzaniso, marori, mataera). Uku kugona kushoma, zvakare, kunogona kukonzera kufamba zvishoma kwepakeji uye kunonoka kunogona.
Mubvunzo: Chii, kana chiripo, chingaitwe nevatengi kuve nechokwadi chekuuya nenguva kwekutenga mwaka wezororo?
A: Pane zvinhu zvinokwana zvitatu zvinoitwa nevatengi kubatsira kukunda matambudziko angangoitika.
Kutanga, tanga mangwanani. Sezvakakurukurwa pamusoro, kutanga kwekutanga pakutenga / kutumira kunogona kubatsira. Kana vatengi vakakwana vatanga kare, izvi zvinobatsira kudzivirira spike hombe mukutumirwa mukupera kwaNovember uye kutanga kwaDecember iyo inogona kukurira mashoma mashoma ekuendesa.
Chechipiri, bvisa zvimwe zvakatumirwa. Semuenzaniso, vatengi vepamhepo vanogona kuve nemakambani anotumira akananga kumhuri uye shamwari pane kuzvitumira ivo vozotumira kumhuri neshamwari.
Pakupedzisira, sarudza sarudzo dzekutakura uye makambani epamhepo zvine hungwaru. Sarudzo dzese dzekutakura hadzina kuenzana mukuvimbika uye nekumhanyisa. Saizvozvowo, makambani ese haana kuenzana zvakaenzana pakumhanya nekuvimbika kwekutenga kwepamhepo.
Mubvunzo: Pane here zvimwe zvekutengesa zvine chekuita nevatengi vanofanirwa kuziva nezvazvo zvemwaka wezororo?
A: Makambani mazhinji ari kutarisana nematambudziko ane masheya uye anononoka kupfuura kuzadzikiswa kwemazuva ese. Iyo yepazasi mutsara yatinayo, muzviitiko zvakawanda, yakanyanya kudiwa pane kugovera. Vatengi vanofanirwa kufunga zvingangoita zviviri zvigadziriswe kumwaka wavo wezororo.
Kutanga, usavhunduke, asi ita zvekuita. Iko kusawirirana pakati pekupihwa uye kudiwa kunogona kukonzera kusawanika uko kunogona kuve kwakaomarara sezvatinofambira mberi mukupera kwa2021.
Chechipiri, tarisa bhajeti. Kugovera / kudiwa mismatches kunogona kukonzera (sezvatiri kutopupurira) mitengo yakakwira. Uyezve, nekushomeka kupihwa zvigadzirwa, vatengesi vanogona kunge vasingadi kupa zvakadzama zvakadzikira. Isu tese tinoda kutengeserana asi kuvamirira kungave kune njodzi gore rino.
Mubvunzo: Nepo vatengi vangangopomera masherufu asina kupfeka musupamaketi chete nekukanganisa kutengeswa, pane zvinhu zvakaita sekushomeka kwevashandi uye kushomeka kwemidziyo irikutamba pano?
A: Hongu, asi zvirinani kuti izvi zvese zvinogona kutariswa sekukanganiswa kwecheni yekupa kana zvimwe zviitiko zvinovatangisa. Semuenzaniso, kana kambani yekugadzira inoronga kuburitsa zviuru gumi zvechigadzirwa mune yakatarwa nguva, asi kushomeka kwevashandi kuchikonzera kugona kwakakwana kuburitsa zviuru zvishanu, chirongwa chakakanganiswa. Zviuru zvishanu zvisipo zvinogona kukonzera masherufu asina kupfeka mune dzimwe nzvimbo. Uye uyu unongova muenzaniso mumwe wezhinji nyaya dzinogona kubatsira mukushomeka kwemaketani ekupa.
Mubvunzo: Pakupedzisira, tinowanzo kunzwa nyanzvi dzichitaura nezve "zvitsva zvakajairwa" mumaketani ekupa. Nekudaro, apo isu tinosvika kumagumo egore rechipiri rerwonzi, kushungurudzika kwevatengi kunoratidzika kunge kuri kuwedzera kuti zvigadzirwa zvigadzirwa hazvisi kuwanikwa nyore. Zvisingaperi zvigadzirwa kushomeka izvo zvitsva zvakajairika?
A: Kwete. Ini handibvumirane neizvi zvivindi, zvepamusoro zvinotaurwa zve "zvitsva zvakajairwa" mumaketani ekupa. Muzviitiko zvakawanda, zvinhu zvinodzokera kune pre-Covid mamiriro. Iko kune mashoma anosara kune izvi, zvakadaro. Ini ndinofunga isu tichaenderera mberi nekuona imwe nhanho yekushomeka sezvo zvitengeswa zvekutengesa zvinodzokera kuzere kugona. Zvakare, kune zvimwe zvinzvimbo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kugadzirisa, sekushomeka kwevatyairi vemarori.
Pachinhu chakajeka, ndinofunga pachave nedanho reCovid-inosimudzira hunyanzvi iyo ichatora mamwe macheni ekupa kune yakakwira nhanho yepamusoro, zvichizounza kukosha kukuru kumutengi. Kusvika padanho rinoitika, vatengi vanogona kusangana ne "zvirinani" zvakajairwa.